WordPress martigelinta socda gaabis ah? U haajiraan martigelinta la maareeyay | Martech Zone
WordPress martigelinta socda gaabis ah? U haajiraan martigelinta la maareeyay
Wednesday, May 6, 2020 Talaado, Oktoobar 27, 2020 Douglas Karr
In kasta oo ay jiraan tobanaan sababo oo ah in rakibiddaada WordPress ay si gaabis ah u socoto (oo ay ku jiraan qoraallo iyo mawduucyo liita oo si liidata u qoran), waxaan aaminsanahay sababta kaliya ee ugu weyn ee dadku u leeyihiin dhibaatooyinka inay tahay tan shirkadda ay martigelinayaan. Baahida dheeraadka ah ee badhanka bulshada iyo isdhexgalka ayaa sii murjinaya arinta - qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa si aad ah u hooseeya sidoo kale.
Dadku way ogaadaan. Ogeysiisyada dhagaystayaashaada. Mana badalayaan. Haysashada bog qaadanaya in ka badan 2 ilbidhiqsi in la rakibo waxay si xad dhaaf ah u kordhin kartaa tirada dadka soo booqda ee ka tagaya bartaada… ama ka xun cart gaadhigaaga wax iibsiga. Sababtaas awgeed, waa lagama maarmaan inaad ka shaqeyso hagaajinta xawaarahaaga.
Wixii WordPress ah, waxaan u haajirnay Flywheel oo aan ka helay natiijooyin aan caadi ahayn. Boggeena wuxuu si isdaba joog ah kor ugu kacaa 99.9% ama ka sareeya (oo marka uusan aheyn, caadi ahaan annaga ayaa ka shaqeynayna). Waxay leeyihiin dhammaan kaabayaasha lagama maarmaanka ah iyo qalabka maamulka si ay u maareeyaan bartaada - ama dhammaan boggaga macaamiishaada - aad ayey uga sahlan yihiin:
1-Guji Soo Celinta - Kaydinta degdegga ah kuna soo celi Snapshot Backups fudud.
Astaamaha Hay'adda - Awoodda lagu maareeyo macaamiisha koontada macmiilka
Buluugyada - Keydso mawduuca bogga iyo waxyaabaha kuxiran sida qaabeynta qaabeynta ee aad u isticmaali karto dhismaha mashaariicda mustaqbalka.
Caching - Tikniyoolajiyadda kalluunka ee xajmiga iyo xawaaraha weyn.
Diyaarinta CDN - Waqtiyada culayska badan ee degdega ah ee maaddooyinka ma guurtada ah.
Dhoolatus - Awoodda isku xidhka goob si fudud.
Kaydinta Maalinlaha - Nidaamyo otomaatig ah, aan xad lahayn si ay u taageeraan barnaamijyadaada muhiimka ah.
Dab-damis - Gidaarro badan oo xoog badan oo u dhexeeya xogtaada iyo hanjabaadaha dibedda.
Xakameynta Nadaafada - Ogaanshaha iyo baabi'inta khayaanada khatarta ah.
Taageerada - taageero farsamo oo fantastik ah oo ka socota khubarada WordPress ee fadhigoodu yahay Mareykanka.
SSL lacag la'aan ah - Ka sahlo SSL dhammaan bogaggaaga.
Diyaarinta - Awoodda isku-xidhka iyo ka shaqaynta aagga diyaarinta, ka dibna si toos ah u riixdo.
Waa maxay Maaraynta WordPress Hosting?
Waxaan u haajirnay in kabadan 50 macmiil Flywheel guud ahaan iyada oo aan ka yarayn 50 rakibaadda WordPress, dhammaantoodna si aan hagaagsanayn ayay u baxeen. Iyo Flywheel waa ku taliyay martigelinta WordPress!
Oh, oo miyaan sheegay in Flywheel ay leedahay u gaar ah tahriibka?
Sababaha Muhiimka Ah Ee Loogu haajiro Flywheel waxaa ka mid ah:
Taageerada WordPress - Kuuma sheegi karo waqtiyada aan la galnay martida halkaasoo ay si toos ah ugu eedeeyeen WordPress digniinta aan la taageerin (in kasta oo ay had iyo jeer leeyihiin 1-riix rakib). Arimaha ogolaanshaha, arimaha kaydinta, arimaha amaanka, arimaha waxqabadka… adigu magacow, waan ku dhex galnay oo martigaliye kastaaba wuxuu eedeeyey WordPress.
Taageerada Hay'adda - waa faa iido weyn in macaamilku leeyahay koontada laakiin waxaa naloogu daray sidii isticmaaleyaal idman, adeegsadayaal taageero idman, iyo isticmaalayaasha FTP ee idman. Haddii macmiil naga tago, way sii joogi karaan Flywheel oo ay sii wadaan guushooda. Mar dambe ma dhici doonto in macaamiisha la haysto ama ay ku jiraan xilli hijrood ah oo aan raaxo lahayn.
Khidmadaha kuxiran - Mar kasta oo aan macmiil iska diiwaan galino Flywheel, waan ka faa'iideysanaa Flywheel. Waxaan u furan nahay daacadna u nahay macaamiisheenna in aan waxoogaa lacag ah ka bixinno ka qayb qaadashada… maaddaama aynaan lacag ka qaadayn soo guuritaankooda, waxba kama qabno.
Dhoolatus - awoodda si aan kala go 'lahayn loo xiriirin karo goob waa wax cajiib ah. Mar dambe uma baahnin inaan ku martigelino jawi meel kale ka dibna u wareejinno martida, Flywheel Waanu awoodnaa inaanu tusno macmiilka horumarka, aynu u oggolaanno inay soo galaan oo ay u qaataan tijaabinta tijaabada, isla markaana ay ugu riixaan si toos ah dhowr guji oo badhan ah.
hayaan - Kaydinta otomaatiga ah ama 1-guji iyo dib u soo celinta waxay ahaayeen kuwo cajiib ah. Waxaan haysannay macmiil tijaabinaya is-dhex-dhexaad saddexaad iyo markasta oo dhinac saddexaad yidhaahdo waxay diyaar u yihiin inay noolaadaan, toos ayaan u socon doonnaa wayna ku fashilantay. Waxaan awoodnay inaan isla markiiba soo ceshano goobtii hore ilbiriqsiyo gudahood illaa ay kahelaan kaabayaashoodii dalabka.
Performance - kalluumeysiga adag ee adag iyo shabakad gaarsiin weyn ayaa ka dhigtay dhammaan macaamiisheenna inay si fiican u shaqeeyaan. Meelaha degdegga ahi waxay hagaajiyaan mitirka beddelka iyo xitaa darajaynta mashiinka raadinta… waa qayb muhiim ah oo aynaan u baahnayn inaan ka walwasho.
Kaarka WP - marka lagu daro mashiinka keydka Flywheel, waxay sidoo kale si buuxda u taageeraan Kaarka WP iyo Rabshad WP plugin. Qalabkaas waa mid la yaab leh - oo leh awood culeys caajis ah, yareyn, isu-soo-uruurinta, dayactirka keydka macluumaadka, iyo awooda hore ee kaydinta. Waa shey qiimihiisu maalgashi yahay!
WordPress Security - farsamooyinka jabsiga adag ayaa wax u dhimi kara noocyada hore ee WordPress ama mawduucyada si xun u qoran iyo plugins. Flywheel wuxuu kormeerayaa noocaaga oo wuxuu hubinayaa in bartaadu aysan u nugulayn sida aan u aragno macaamiisha dadka kale inay sii wadaan in la jabsado. Ku garaac alwaax, waligeen wax dhibaato ah nama soo marin. Waana jecel nahay taas Flywheel waxay si firfircoon kor ugu qaadi doontaa noocyada haddii ay jirto khatar amni oo la xaqiijiyey.
Diyaarinta - Flywheel waxay leedahay awood waxqabad xoog leh oo ay awood ugu yeelan karaan mid kasta oo ka mid ah boggagaaga, adiga oo awood kuu siinaya inaad ku soo koobto goobtaada aag diyaarin ah, cusbooneysii goobta la diyaariyey, oo aad dib ugu riixdo inaad ku noolaato markaad diyaar tahay. Waa aalad layaableh oo waajib ku ah qof kasta oo doonaya inuu cusboonaysiin muhiim ah ka sameeyo barta ay ku sugan yihiin - sida u cusboonaynta mawduuc cusub.
Haddii taasi aysan ku filnayn, Flywheel waxay soo saareen codsigooda shaqaalaynta ee loo yaqaan 'Local'. Codsigu wuxuu awood u siiyaa kuwa wax dhisa inay:
Abuur degmo hal guji ah!
Samee tafatir oo tus macmiilkaaga adoo adeegsanaya demo URL
Ku daabac Flywheel hal guji oo keliya (oo way shaqaysaa)
Waxaan helnay caawimaad ka Flywheel injineerada arrimo dhowr ah horeyba. Waxaan soo marnay goobo la jabsaday oo kooxdooda ay keeneen khubaro xagga amniga ah si ay u aqoonsadaan arrinta (sida caadiga ah qalab) oo ay saxaan. Waxaan soo marnay goobo ay ka jireen arrimo waxqabad oo kooxdooda (iyo interface-keeda) ay naga caawiyeen inaan xallino oo aan saxno. Waxaan haynaa goobo qaatay 10 ilbiriqsiyo ah oo aan ku soo dhignay martigaliyayaal kale oo ku raran wax ka yar 2 ilbidhiqsi Flywheel.
Mana aha kaliya sheegashooyinkeena. Waxaan la wadaagnay guusheena hay'ado kale, waxayna u haajireen macaamiishoodii oo dhan Flywheel. Ikhtiyaar qaas ah oo leh WordPress ayaa u oggolaanaya macaamiishaada inay iibsadaan qorshaha ka dibna ku dar kooxdaada sidii isticmaaleyaal idman. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku codsatid taageero iyaga oo ka wakiil ah oo aad maamusho isticmaaleyaasha iyo marin u helka SFTP - dhammaantood inta macmiilku leeyahay koontada. U sii macaamiishaada nambarkaaga xiriiriye iyo Flywheel xitaa lacag ku siiya.
Waxqabadka ka soo baxay waxqabadka ayaa gacan ka geysatey yareynta sicirka boodada, kordhinta waqtiga bogga, iyo - horumarka bogga xawaare awgiis - wuxuu naga caawiyey inaan gaarno muuqaalka mashiinka raadinta ee cajiibka ah. Oh… iyo haa, xiriiriyeyaasha kujira boostadan ayaa ah xiriiriyeyaal xiriirkeena ah.
Kuwa kale ee WordPress Maareeyayaasha Bixiya
WordPress Maareynta Marti gelinta ayaa caan ku ah WordPress 'korsashada ballaaran. Waxaa jira marti sharaf kale oo waaweeyn oo isla warshad ah dhamaantoodna waan adeegsanay:
WPEngine - hadda wuxuu leeyahay Flywheel! WPEngine waxay leedahay xoogaa ilo wadaag ah laakiin waxay leedahay astaamo gaar ah. Midka aan uga baahanahay macmiilku wuxuu ahaa awoodda si toos ah loogu soo dejisan karo faylalka gelitaanka gelitaanka ee waafaqsanaanta.
Kinsta - waxay sameysay hirar waaweyn oo warshadaha ah kaabayaasheeda cajiibka ah. Waxay u shaqeeyaan goobo aad u deg deg ah oo loogu talagalay noocyo aad u waaweyn.
Tags: beddelka wpenginemartigelinta ugu fiicanflywheelflywheel maxaliga ahssl bilaash ahculays caajis ahhorumarinta wordpress deegaankamaaraynta wordpress martigelintaWordPresskeydinta wordpresskeydinta wordpresswordpress cdnhabeynta wordpresshorumarinta wordpressfirewall wordpressmarti gelinta wordpressereyada khaldanwordpress sslwordpress daadintaageerada wordpresswpcachewpengineWpengine martigelinta
Sida Loo Helo Fonts-ka Adobe Capture
Barnaamijka 'SERP' ee maanta: Muuqaal Muuqaal ah oo ku saabsan Sanduuqyada Google, Kaararka, goos gooska hodanka, iyo Golaha
Agoosto 26, 2011 saacaddu markay ahayd 1:14 PM
Waan hubiyey laakiin dhibaatada guud ee aan kaheysto dhamaan dukaamada WordPress ee martigelinaya ayaa ah inaad ka tanaasusho cunsur xakamaynta aanan aqbali karin. Socodka degel websaydh ah ayaa ii baahan inaan si buuxda u xakameeyo dhinac kasta - oo ay ku jiraan plugins iyo marin u helista xogta. Xirmooyinka qiimeyntooda sidoo kale macno uma sameynayaan xaqiiqda - $ 100 / bishii ee 250k bogga iyo 100gb? Waa maxay xadka aan loo aabbo yeelin ee aan garaaci lahaa 2-3 toddobaad. Hadda waxaan isticmaalayaa Macbadka Warbaahinta (oo wax badan ayaan ku bixinayaa) - oo waxaan adeegsanayaa aalad kasta oo 'optimization' ah (cahcing, CDN, iwm) oo la heli karo ma qaban karo waqtiyo culeys ka fiican 9-10 sekan. Qodobka aan isku dayayo in aan sheego ayaa ah in aysan jirin xabad qalin ah marka ay timaado helitaanka WordPress in ay si dhakhso ah u socoto. Waan isku dayay dhammaantood.
Agoosto 26, 2011 saacaddu markay ahayd 5:25 PM
Waad xakameyn kartaa dhinac walba iyaga, Jonathan. Boggeena wuxuu leeyahay tan tan oo u habeyn iyo fiilooyin si loo helo wax walba oo aan jeclaan laheyn. Waxaan rumeysanahay in qiimeyntu ay aad ugufiican tahay iskucelceliska barta shirkadaha… qofka celceliska ah ma garanayo sida loo habeeyo CDN-yada iyo keydinta markaa tani dhab ahaan waa ka hooseysaa qiimahaas. BTW: Waxaan u adeegsanaa Mediatemple sidoo kale… CDN iyo Cloudflare oo si fudud uma fuliso sidii aan jeclaan lahayn.
Sep 14, 2011 at 5: 29 PM
Miyaad martigelinaysaa bogga WordPress ee ku yaal shabakadda shabakadda 'Media Temple' ama server-u gaar ah? Waxaan haystay goob sahlan oo lagu martiqaaday (mt) muddo 2 sano ah oo ku jirtay shabakada iyo waqtiyada xamuulka waxay ahaayeen uun cabsi, qosol gaabis ah iyo aagga maamulka oo kaliya wuxuu ahaa xanuun murugo leh dameerka. Miyaan xusay khibrada oo dhan waxay ahayd mid gebi ahaanba xun?
Waxaan sameeyay wax kasta oo suurtagal ah qorraxda hoosteeda si aan u hagaajiyo degelkeyga marka laga reebo iibsashada weel grid ah oo aan waxba shaqeyn. Waxaan ku qurxiyay minify, WP Super Cache, iwm. Xitaa waxaan isku dayay inaan u adeegsado CloudFlare goob kale oo wp martigelisay laakiin waqtiyada xamuulka waa wax lagu qoslo. 20 ilbiriqsiyo ah in lagu raro bogga guriga?
Waxaan go'aansaday inaan u wareejiyo degelkeyga Hostgator isla markaana xawaaraha kororka ayaa saddex jibaarmay habeenki. Wali waan u xiisay gudiga xakamaynta (mt) oo ah mid layaableh laakiin xawaaraha goobtayda ayaa kufilmaya muuqaal fiican.
Hadda waxaan mar labaad u dukaameysanayaa martigaliye websaydh ah laakiin markan waxaan u baahnaan doonaa inaan rakibo waxyaabo badan oo awood u leh martigelinta 10 bogag yar oo dhexdeeda ah. Waxaan eegay (mt) heeganka dalwaddii, WP Engine iyo Page.ly. Macbadka Warbaahinta ayaa umuuqda inuu yahay heshiis aad ugafiican waana horeyba iigu gubay shabakada, laakiin waxaan la yaabanahay hadii kumbuyuutarkooda u heellan uu i siin doono xawaaraha xawaaraha ee aan ubaahanahay iyo sahlanaanta isticmaalka ee la imanaya barxadahooda koontaroola.
Sep 14, 2011 at 7: 09 PM
MT waa kaliya "heshiis" haddii aad rabto mashiin aan lahayn taageero gaar ah oo loogu talagalay WordPress. Haddii aad rabto inaad sameyso amniga naftaada, xawaareyso naftaada, iskudhafka naftaada, CDN naftaada (oo iska bixi).
Ka dibna waxaa jira helitaan sare. Labadaba sababo la xiriira barnaamijyada softiweerka iyo qalabka kombiyuutarka, hal rakibo hal server ma noqon karto mid si heer sare ah loo heli karo sida kutlada.
Aragtidayada, isku dayga inaad keydiso $ 20 / mo laakiin inaad sameyso dhamaan waxyaabahaas naftaada maahan adeegsi wanaagsan oo waqti ama lacag ah. Way noo fududahay maxaa yeelay waxaan dejineynaa qiimaha intaas oo dhan macaamiisheenna oo dhan; waa wax aad u badan oo macquul ah hal goob in la sameeyo haddii aadan TechCrunch ahayn.
Sep 14, 2011 at 7: 38 PM
Mahadsanid Jason. Waxaan idinku tooganayaa idinka nin macluumaad ah adoo adeegsanaya bartaada si aad u hesho qiime.
Agoosto 26, 2011 saacaddu markay ahayd 6:17 PM
Salaan Joanathan, waan fahmay meeshaad ka timid, laakiin ma aadan isku dayin wali dhamaan hadii aadan na tijaabin. 🙂
Xuduudahaasi waa hage - annagu ma deminayno bartaada ama wax uun haddii aad garaacdo, waxay ka dhigan tahay inay naga qaalisan tahay intaas in ka badanna adigana ay kugu kici doonto. Waan ka hadli karnaa.
Waxaan soo marnay dad badan oo aan awoodin inay wax ka qabtaan dhibic hore, laakiin markaa nala arag horumar. Sababtoo ah: http://wpengine.com/our-infrastructure .
Sidoo kale, waxaan * ku siineynaa * inaan ku siino kantaroolida fiilooyinka, koodhka qaaska ah, iyo marin u helka xogta, marka ha u maleynin inaan kaa xiridoono!
Taabadalkeed, maxaad noo siineysaa fursad… aan u guurin nuqul ka mid ah mareegahaaga, ka dibna ii soo dir email (jason at wpengine) oo aan aragno waxa aan sameyn karno.
Oktoobar 9, 2011 at 11:42 PM
9-10 ilbidhiqsi lama aqbali karo. Shakhsiyan waxaan helay ka beddelashada 'Thesis' oo loo yaqaan 'Woo Frame' oo ka dhigaysa degelkeygu si aad u gaabis ah. Waxaan ku rarnaa 3 ilbidhiqsi oo hadda jidkeedu wuu gaabis yahay.
Waxaan helay VPS inay aad ugafiicantahay martigalinta la wadaago waxaan udhaqaajiyay dhowr goobood MT taas oo ah gimmick iyo dhib dhibatadayda aragtidayda iyo waliba aad iyo aad u qaali ah
Waxaad VPS ku heli kartaa cPanel oo ah $ 35 bishii oo ka jaban xirmooyinka sannadlaha ah. Ka raqiisan markale VPS oo leh Plesk
Oktoobar 1, 2012 at 1:52 PM
Hambalyo Brad… Haddii aadan dhib iga galin inaan weydiiyo .. xagee ka heshay “VPS oo wata cPanel usd $ 35 bishii”
Taasi ma MT baa? Waxaad dhahdaa waxaad u guurtay dhowr goobood halkaas laakiin muxuu yahay cirridkoodu? Miyaad ku faraxsan tahay iyaga?
Waan yara wareersanahay faallooyinkaaga.
Anonymous, Waxaan u maleynayaa inaad ka heli doontid dadkan inay xoogaa ka yara duwan yihiin. Marka hore, waxaad haysataa marin SFTP sidaa darteed waxaad ku samayn kartaa isbeddelada aad ugu baahan tahay dhinaca qalabka. Maadaama aad haysato gal buuxa oo fayl ah, waxaad ku samayn kartaa wax alla wixii aad rabto kaydinta xogta. Aniguba sidoo kale, waxaan joogaa MediaTemple waxaanan adeegsanayaa kaydinta iyo CDN… laakiin adiga iyo anigu waxaan nahay nooc dhif ah. Haddii qof uusan fahmin sida loo hagaajiyo xawaaraha bogga, WP Engine waa xalka ugu fiican tan iyo markii ay ka walwalayaan waxqabadka markaa uma baahnid. Caddadka aragtiyada bogga iyo baaxadda ballaadhinta ayaa aad uga miisaan badan waxa celcelis ahaan baloogle shirkadeed u baahan yahay. Haddii aad kiraysan lahayd xirfadle si aad u hagaajisid bartaada oo aad u habeysid CDN, waxay kugu kici laheyd wax badan, aad iyo aad u badan.
Agoosto 26, 2011 saacaddu markay ahayd 5:01 PM
Sayidow wanaagsan websaydhkaagu si dhakhso leh ayuu u shaqeeyaa.
Agoosto 26, 2011 saacaddu markay ahayd 5:14 PM
Weli maahan - laakiin waa!
Agoosto 26, 2011 saacaddu markay ahayd 5:16 PM
Runtii? Waxaan moodayay inaad horey u haajirtay. Hadaanay ahayn, waxaad ku fiicantahay xawaaraha sida ay tahay.
Agoosto 26, 2011 saacaddu markay ahayd 5:22 PM
Waxaan bilaabay inaan adeegsado Cloudflare - iska hubi, waa adeeg bilaash ah oo culeys badan ayaa ka qaaday adeegyadeena martigelinta ee Mediatemple. Maaha kan ugu dhakhsaha badan, laakiin xawaaraha guud ayaa soo hagaagaya dartiis.
Agoosto 26, 2011 saacaddu markay ahayd 5:50 PM
Cajiib. Waa inaan hubiyaa. Waxaa si la yaab leh leh, muuqaalka aan ugu jeclahay ee WPEngine markaan hubiyey ma ahayn xawaaraha ama qeybinta. Waxay ahayd 1-guji tirinta. Sidee macaan taasi waa?
Agoosto 28, 2011 saacaddu markay ahayd 1:40 PM
Waxaan ka shakisanahay in wax kasta oo ku lug leh Jason Cohen uu noqon doono dahab adag. Marnaba uma aanan baahnayn wada-shaqeeyntiisa, isagoo ah koox hal qof ah, LOL. Laakiin, waan la socday oo waxaan baranayay falsafadiisa muddo ka badan laba sano.
Markii ugu horeysay ee uu wax ka qoro WP Engine, waan la yaabay. Dabcan, wuu dib u cusbooneysiiyaa waqti ka waqti waana sida aan maanta u soo galay.
Si la yaab leh, waxaan u maleynayaa inaanan diyaar u aheyn WP Engine, weli, sidaa darteed waxaan ku xirnaan doonaa CloudFlare.
Sep 14, 2011 at 5: 33 PM
La socoshada wadahadalkan - waxaan ku dhammaaday inaan u beddelo martigelinta Anglotopia.net illaa Wpengine, degelkayguna si dhakhso leh ayuu u socdaa. Waxaan hayaa server-ka MT-ga qaar ka mid ah bogagooda halka waqtiga culeysku uusan ahayn arrin laakiin hadda Anglotopia waa halka ay u baahan tahay.
Jun 26, 2012 saacadu markay ahayd 4:45 AM
waa wax aad qaali u ah goobta kaliya. Waxaan u tagi doonaa VPS aan la maamulin halkii. Waxaan lahaan doonaa xayndaabyo aan xadidnayn iyo nidaamyo qarsoodi ah sida xcache.